မနေ့က F-Secure စမ်းပြီးသုံးချင်တာနဲ့ Torrent Site တစ်ခုကနေ ဆွဲချပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ Run လည်း Run ပြီး စက်လည်း Restart လုပ်ရော Screen မှာ ဘာမှ မပေါ်တော့ဘူး။ ထင်တာကတော့ ကွန်ပျူတာကြောင်သွားလို့ပဲလား။ Program တွေအရမ်းများနေလို့ပဲလားမသိ။ တစ်ညလုံး ခဏခဏ Restart ပြန်လုပ်တာလည်း မရ။ ချွေးလည်းပျံနေပြီ Project ကလုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတာကိုး။ ကျောင်းမှာလုပ်ဖို့ရလည်း ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ။ မနက်ကျောင်းသွားခါနီး ပြန်ဖွင့်တော့မှ တောစောင့်နတ် တောင်စောင့်နတ်တွေ မလို့သာပေါ့ ကျေးဇူးရှင် ကွန်ပျူတာ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။ နဲနဲတော့ သဘောပေါက်လိုကတယ် Torrent တွေကလာတဲ့ ဟာတွေလည်း စိတ်မချရဘူး။ Comment တွေကို ဖတ်ပြီးမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ F-Secure လေးကို စက်တက်တက်ချင်း ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှ နဲနဲလေးစက်က သွက်သွားတယ်။ သူ့ခမျာလည်း မနိုင်ဝန်ထမ်းထားရရှာသလိုဖြစ်နေတယ်။ Security အတွက်စမ်းသုံးရင်းနဲ့ ကိုယ့်စက်ပါ ငါးပါးမှောက်တော့မလို့။ အခုတော့ AVG လေးနဲ့ အနည်ထိုင်သွားပြီ။ စက်လည်း သိပ်မလေးတော့ မဆိုးဘူး။ Firewall ကတော့ Sygate ပဲသုံးလိုက်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခြားဟာတွေတော့ ထပ်ပြီး မစမ်းသပ်ချင်တော့ဘူး။ မောင်ဖိုးချမ်း မင်း ပလီတာနဲ့ပဲ စက်ကလေး ကြွတော့မလို့ :P
AVG နှင့် Sygate သုံးချင်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
AVG 7.5 All in one complete
MYO HAN HTUN 2:18 am
ငါ့ညီ .. CMS ရေ .. အလကားရတဲ့ Software တွေဟာ များသောအားဖြင့် ဒီလို ကမောက်ကမတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပြသနာဖြစ်ရင်လည်း သူတို့ကို ဘာမှ ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကြီး Software Company တွေကလည်း
ထို အလကားပေး Software တွေကို ဈေးကွက်ဖျက်တယ် ဆိုပြီး အမြင်ကတ်ကြတာရှိသလို .. သုံးတဲ့ Users တွေကလည်း
ပြသနာတတ်တိုင်း “တောက်” ခေါက်ရုံထက် ပိုလုပ်လို့မရလို့ များသောအားဖြင့် သေသေချာချာ စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ သုံးသင့်ပါတယ်။
အကိုလည်း ခဏ ခဏ ပြသနာတတ်လွန်းလို့ နောက်ပိုင်း ထို Software တွေကို စမ်းလည်းမစမ်းတော့ဘူး။
အရင်တုန်းကတော့ သူများတွေနဲ့ Software အကြောင်းတွေ Program အကြောင်းတွေ အားကျမခံ ပြောချင်လွန်းလို့ တွေ့ကရာ
ထွက်သမျှတွေ လျှောက်စမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် .. နောက်ပိုင်း Major Software တွေ Major Program တွေ (ဥပမာ .. Microsoft, Adobe Macromedia, Autodesk) လောက်သာ လေ့လာပါတော့တယ်။ ထို Software တွေ အကြောင်းကိုတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့သာ ဖတ်တော့တယ် ..
စမ်းဖို့ကိုတော့ မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် .. ကိုယ့်မှာ Computer နှစ်လုံး ရှိရင်တော့ ကျန်တဲ့ တစ်လုံးမှာ ထို Program တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်သင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ် .. ပြသနာဖြစ်ရင်လည်း ထိုစမ်းတဲ့ စက်မှာပဲဖြစ်တာမို့ .. ကိုယ့် Data တွေ lost ဖြစ်မသွားပါဘူး။ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံး Format ကိုင်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ..
စမ်းရင်တော့ စမ်းတဲ့ Software တိုင်း Program တိုင်း Note လေးထားသင့်တယ် ထင်ပါတယ် .. ဒါက ကိုတိုး အမြင်ပါ ..
that's ususlly happen to me often when i downloaded and run from torrent sites. becareful,those are malwares and spywares.
CMS 5:17 am
ကိုတိုးနဲ့ Anonymous ရေ
ကျွန်တော်လည်း အတွေ့အကြုံတော်တော်ရသွားသလို လန့်လည်းသွားပြီ :) ကိုတိုးတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ :) အစမ်းကောင်းပြီး ငုတ်တုတ်မေ့တော့မလို့ :P
mgthantzin 10:27 am
Komodo Firewall နဲ့ AntiVir လည်း နာမည်ကြီးတယ် ဆိုပဲ။
CMS 12:36 pm
တွေ့တယ်ညီရေ .... စမ်းသုံးရမှာ လန့်နေတယ်
ခဲမှန်ဘူးတဲ့ စာသူငယ်လိုဖြစ်နေတယ် :P